Fahad Yaasiin oo kulan qarsoodi ah la qaatey Guudlaawe | KEYDMEDIA ENGLISH
Fahad ayaa u xusul-duubaya in degaan doorashadda kursiga ooh adda tahay Beledweyne in loo soo wareejiyo Jowhar, maadaama Muqdisho u dhawdahay, islamarkaana uu amnigiisa ku halleyn karo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Fahad Yaasiin ayaa kulan socdey ilaa afar saacadood kula qaatey saakay Decale Airport Hotel kula yeeshay Madaxweynaha maamulka HirShabeelle Cali Guudlaawe, sida ay ogaatey Keydmedia.
Macluumaadka KON heshay ayaa tibaaxaya in kulan uu dhacay kahor inta uusan Guudlaawe maanta u ambabixin magaaladda Jowhar, ee Caasimadda maamulka uu hogaamiyo ee HirShabeelle.
Wararka ayaa sheegaya in kulanka Fahad iyo Guudlaawe ahaa mid qarsoodi ah, oo albaabada u xirnaa, oo xitaa loo diiday inay qolka galaan ilaalada gaarka iyo shaqsiyaad kale oo labada dhinac la socday.
Arrimaha Fahad kala hadlay Guudlaawe waxaa kamid ah Kursiga Gollaha Shacabka ee uu doonayo inuu ku fariistay, kaasoo degaan doorashadiisu tahay Beledweyne, oo katirsan maamulka HirShabeelle [Halkan ka akhri].
Kursigan waxaa mudo dheer ku fadhiyay Faarax C/qaadir oo Damul-Jadiiid katirsan, waxaana sanadkan doonaya Fahad Yaasiin, oo siyaadda Soomaaliya ku dakanoobay mudo-xileedkii Farmaajo.
Sidoo kale, Cali Guudlaawe ayaa xalay madaxtooyadda Villa Soomaaliya kula kulmay Madaxweynaha uu waqtigiisu dhamaadey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxayna kawada hadleen arrimo dhowr ah.
Fahad ayaa tan iyo markii uu fashilmay isku-daygii afgembiga 27-kii December, wuxuu deganaa Decale Airport Hotel, maadaama kacdoon ku furmay, isagoo ka baqayay in Ciidanka Badbaado qaran galaan Madaxtooyadda kadibna isaga iyo Farmaajo lagu dilo.
Comments Topics: cali guudlaawe fahad yaasiin